But where is the fur - İngilizce - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: but where is the fury of the oppressor (İngilizce - Birmanca)
ဥရောပသည် ကပ်ရောဂါ၏ ဗဟိုချက်အသစ် ဖြစ်သည်။
August 30 is the International Day of the Disappeared.
သြဂုတ်လ ၃၀ရက်နေ့သည် နိုင်ငံတကာ ပျောက်ဆုံးသူများနေ့ဖြစ်သည်။
အချုပ်ခံရသောသူတို့သည်လည်း အတူငြိမ်ဝပ်ရကြ၏။ ညှဉ်းဆဲသောသူ၏စကားသံကိုမကြားရကြ။
အာဏာထားတတ်သော သူ၏အိမ်သည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ မတရားသောသူတို့၏ ဘုံဗိမာန်တို့ သည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု သင်တို့သည် ဆိုကြလိမ့် မည်။
ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်မည်အကြောင်း၊ ပညတ်တရားသည် ခရစ်တော်အားဖြင့် စုံလင်ခြင်းရှိ၏။
ဟာမတ်မင်းကြီး၊ အာပဒ်မင်းကြီးနှင့် သေဖရ ဝိမ်မြို့၊ ဟေနမြို့၊ဣဝါမြို့ကို စိုးစံသောမင်းကြီးတို့သည် အဘယ်မှာ ရှိကြသနည်းဟု မှာလိုက်လေ၏။
ပဌမလတဆယ်လေးရက်နေ့၌၊ ထာဝရဘုရား၏ ပသခါပွဲဖြစ်၏။
ထိုသားတော်သည် မျက်မြင်မရသော ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်၏။ ဝေနေယျသတ္တဝါ အပေါင်းတို့တွင်လည်း သားဦးဖြစ်တော်မူ၏။
ဤအသွေးကား၊ သင်၌ဘုရားသခင် ဝန်ခံတော်မူသော ပဋိညာဉ်၏ အသွေးဖြစ်သည်ဟု ပြောဆို၏။
ဟာမတ်မင်းကြီး၊ အာပဒ်မင်းကြီးနှင့် သေဖရ ဝိမ်မြို့၊ ဟေနမြို့၊ ဣဝါမြို့ကိုစိုးစံသော မင်းကြီးတို့သည် အဘယ်မှာရှိကြသနည်းဟု မှာလိုက်လေ၏။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောသူသည် ကိုယ်နှင့် မစပ်ဆိုင်သော သူ၏အကျိုးကို မဖျက်ဆီးတတ်။ ထိုကြောင့်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အကျင့်တရားပြည့်စုံရာ ဖြစ်သတည်း။
ဒုစရိုက်ကို ပြုသောသူမည်သည်ကား၊ ပညတ်တော်ကို လွန်ကျူး၏။ ဒုစရိုက်သည်ကား ပညတ်တော်ကို လွန်ကျူးခြင်းဖြစ်သတည်း။
nange film videos belonging english hd (Hintçe>İngilizce)promouvoir au bien etre sociale de la population (Fransızca>İngilizce)puhepalvelu (Fince>İngilizce)anchata munacuyqui (Keçuva>İspanyolca)kannada prabandha komuvada (İngilizce>Kannada)from us (İngilizce>Galce)my pencil is big (İngilizce>Tagalogca)szt (Lehçe>Almanca)siya lagi ang kasama ko sa galaan (Tagalogca>İngilizce)majirani (Svahili>İngilizce)universidades adjuntas (İspanyolca>Portekizce)planta de sabila (İspanyolca>İtalyanca)pupunta ako ng probinsya (Tagalogca>İngilizce)malay word (Tagalogca>Malayca)in vitam mortem (Latince>İngilizce)buona fortuna donna,lucia (İtalyanca>Fransızca)picconia (İtalyanca>İngilizce)ganuga oil (Telugu>Hintçe)waterer (İngilizce>Macarca)philipo (İtalyanca>İngilizce)acetilglutamato (İspanyolca>İtalyanca)lacus lacrimalis (İngilizce>Fransızca)curet deus, ut quam optime valeas! (Latince>İngilizce)undatus (İngilizce>Yunanca)crom (İspanyolca>İngilizce)